बेड भरिएपछि संक्रमितलाई कुर्सी र बेन्चमा राखेर उपचार गर्दै टेकु अस्पताल (भिडिओ) :: विवेक राई :: Setopati
बेड भरिएपछि संक्रमितलाई कुर्सी र बेन्चमा राखेर उपचार गर्दै टेकु अस्पताल (भिडिओ)
हिजोआज टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल पुग्दा आकस्मिक कक्षबाहिर दश-बाह्र जना कोरोना संक्रमित भुइँमै लडिरहेका भेन्टिन्छन्। कोही म्याट ओछ्याएर भुँइमै पल्टिरहेका हुन्छन्। कोही नाकमा अक्सिजन पाइप घुसारेर कुर्सी र बेन्चमा अडेस लागेका हुन्छन्।
कोही भने त्यहीँ कुर्सी र बेन्च कतिबेला खाली हुन्छ र आफ्ना बिरामीलाई राखौंला भनेर ढुकिरहेका हुन्छन्।
त्यसरी कुरेरै राहुल बञ्जराले आफ्नी ७४ वर्षीया हजुरआमालाई बेन्चमै भए पनि भर्ना गर्न पाए।
काठमाडौंका राहुल सोमबार बिहानै हजुरआमालाई लिएर टेकु अस्पताल पुगेका थिए। हजुरआमालाई ह्विलचियरमा गुडाउँदै उनी आकास्मिक कक्षतिर अघि बढे। तर उनले परैबाट बिरामी भुइँमै पल्टिरहेका देखे। त्यसपछि उनले हजुरआमालाई बाहिरै एकछेउमा लगेर राखे।
केहीबेरमा एक्सरे गर्दा हजुरआमामा निमोनिया देखियो। अक्सिजन मात्रा पनि कमी छ भनेर चिकित्सकले सुनाएपछि राहुलले हजुरआमालाई भर्ना गर्नुपर्छ भनेर बेड सोध्न गए। एउटा पनि बेड खाली नभएको अस्पतालले जवाफ दियो।
त्यसपछि उनी कतै बाहिरै रहेको कुर्सी वा बेन्च खाली भइहाल्छ कि भनेर एकछेउमा ढुकेर बसे। नभन्दै बेन्चमा उपचाररत् एकजनाले संक्रमित डिस्चार्ज पाइन्। त्यसले राहुललाई राहत दियो।
जुन बेन्चमा संक्रमित उपचाररत् थिइन् उनका नातेदारले राहुललाई अगाडिदेखि नै विचार गरिरहेका थिए। त्यहाँ भएकामध्ये गाह्रो राहुललाई नै भएको थियो। ह्विलचियरमा रहेकी हजुरआमालाई समातिरहेको देखेर ती मानिसले राहुललाई आफूहरूको बेन्च खाली हुन लागेको भन्दै त्यहीँ बस्न सुझाए। यति सुनेर राहुललाई ठूलो सास आयो।
उनले अस्पतालमा अरू बेड नपाए पनि यसो म्याट बोकेर आएचाहिँ बाहिरै भए पनि उपचार पाउन सकिने जनाए।
'मैले पनि सोधपुछ गर्न जाँदा बेड पाइनँ। तर आफ्नो म्याट बोकेर आयो भनेचाहिँ यसो कुर्सी, बेन्चतिर ठाउँ पाइन सकिने रैछ,' उनले भने।
बेन्चमा ठाउँ पाएपछि चिकित्सक आएर हजुरआमालाई नाकमा अक्सिजन पाइप हाल्दिए र बेन्चमा ढल्काइदिए।
यसरी नै संक्रमित भर्ना गर्न भनेर दैनिक अस्पतालमा मानिस आउने गर्छन्। तर अस्पताललाई भने संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ। आकस्मिक कक्षमा खटिएका डा. श्रवणकुमार मण्डलले गत दश दिनदेखि बेड भरिएका कारण संक्रमितलाई बाहिरै उपचार गर्न थालिएको जानकारी दिए।
'बिरामीको चापभन्दा बेडको संख्या कम भएर हामीले बाहिरै उपचार गरिरहेको हो। पहिले इमर्जेन्सीमा १० वटा बेड थियो पछि त्यसलाई बढाएर २५ पुर्‍यायौं तर त्यो पनि भरियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'बिरामी धान्न नसकेपछि अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई पनि इमर्जेन्सी गेटअगाडि कुर्सी, बेन्चमा राखेर भए पनि उपचार गरेका हौं।'
डाक्टर श्रवणकुमार मण्डल।
कुर्सी र बेन्चमै उपचार भइरहेका संक्रमित सबै सामान्य अवस्थाका छैनन्। डा. मण्डलले कति संक्रमितलाई भने जुनसुकै बेला आइसियू चाहिन सक्ने जनाए। अस्पतालमा रहेको २६ वटा आइसियू सबै भरिएका छन्।
'इमर्जेन्सीमै रहेका ६ जना संक्रमितलाई जतिबेला पनि आइसियू वा भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। त्यही भएर आइसियू र भेन्टिलेटरको अभाव भएका कारण हामीले 'हाइ फ्लो अक्सिजन' दिएर इमर्जेन्सीमै राखेका छौं,' उनले भने, 'यहाँ बाहिर रहेका संक्रमित पनि सबैजना सामान्य अवस्थाका हुनुहुन्न। कोही लडिरहनुभएको छ। कति आइसियू चाहिने अवस्थाका हुनुहुन्छ।'
उनले बेड नपाएका संक्रमितलाई कुर्सी र बेन्चमै राखेर अक्सिजन दिन सक्दा बिरामीमा धेरै सुधार देखिएको सुनाए। उनले उपचारमा मुख्य आवश्यकता नै अक्सिजन रहेको भन्दै जति धेरै अक्सिजन र जनशक्ति भयो त्यति नै धेरै संक्रमितको उपचार गर्न सकिने जनाए। तर अक्सिजन अभावका कारण सोचेजति सेवा दिन नसकेको उनले बताए।
'महामारीमा सबैले बेड पाउँछ भन्ने हुँदैन। जसरी हुन्छ, जहाँ हुन्छ हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीसँग चाहिने जनशक्ति, औषधि, अक्सिजन छ भने भोलि पर्दा हामी अस्पतालको आँगनमा पनि उपचार गर्न सक्छौं,' डा. मण्डलले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २८, २०७८, ०५:३९:००